Nepali Christian Bible Study Resources - अक्विला र प्रिस्किल्ला
» सुसमाचार प्रचार » अक्विला र प्रिस्किल्ला
१)	अक्विला र प्रिस्किल्ला उद्यमी थिए:
२)	उनीहरू आतिथि सत्कार गर्न सरीक थिए:
३)	उनीहरू सिकाउन सकिने स्वभावका थिए:
४)	उनीहरू बाइबलमुखी थिए:
५)	उनीहरू स्थानीय मण्डलीमुखी थिए:
१ कोरिन्थी १६:१९ र रोमी १६:५ - यी दुवै खण्डहरूले तिनीहरूको घरमा (रोम र एफेसस दुवैमा) भएको मण्डलीको बारेमा बताएको छ। तिनीहरूको घर विश्वासीहरूको लागि भेला हुने ठाउँ थियो - उपासना गर्ने, गाउने, प्रचार गर्ने, सङ्गति गर्ने, प्रार्थना गर्ने, र रोटी भाँच्ने स्थान थियो।
६)	उनीहरू पति-पत्नी मिलेर बनेको एक टोली थिए:
७)	परमेश्वरबाट दान पाएको व्यक्तिसित उनीहरूको ठीक सम्बन्ध थियो:
रोमी १६:३ - यस पदमा तिनीहरूलाई पावलका "सहकर्मीहरू" भनी जनाइएको छ। जब अक्विला र प्रिस्किल्ला पावलको विचारमा आउँथ्यो, उसले भन्न सक्थ्यो, "यी प्रिय विश्वासीहरू मेरा सहयोगीहरू हुन्, मेरा सहकर्मीहरू हुन्।" के तपाईंको पाष्टरले तपाईंको बारेमा यस्तै भन्न सक्नुहुन्छ? परमेश्वरबाट दान-प्राप्त व्यक्तिसँग तपाईंको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको छ (तुलना गर्नुहोस् एफेसी ४:११)? तपाईं आफ्‍नो पाष्टरको सहयोगी हुनुहुन्छ कि बाधक हुनुहुन्छ? तपाईं उहाँसँगै मिलेर काम गर्दैहुनुहुन्छ कि उहाँको विरूद्धमा? के उहाँले तपाईंलाई फाइदाजनक देख्नुहुन्छ कि हानिकारक? पावलले निश्चय नै यी श्रीमान-श्रीमतीको टोलीलाई उनको सेवकाइ र ख्रीष्टको सेवामा ठूलो फाइदाको रूपमा देख्ने गरेका थिए।
रोमी १६:४ - स्पष्ट रूपमा पावलको जीवन यी साहसी श्रीमान-श्रीमतीप्रति ऋणी थियो। हामीलाई विस्तृत रूपमा बताइएको त छैन, तर तिनीहरूले कुनै न कुनै किसिमले आफ्‍नो जीवनलाई पावलको निम्ति जोखिम र सङ्कटमा पारेको हुनुपर्छ। तिनीहरूले पावलको ज्यान जोगाउनको लागि आफ्‍नै गर्दन दिएका थिए, र परिणामस्वरूप पावल र अन्यजातिहरूका सबै मण्डलीहरू तिनीहरूप्रति धन्यवादको ऋणी थिए। पावल परमेश्वरबाट अन्यजातिहरूका लागि एक विशेष प्रेरित थिए, र यदि प्रिस्किल्ला र अक्विला बीचमा नआएका भए, पावलको मृत्यु भइसकेको हुन्थ्यो र अन्यजातिहरूप्रति उनको सेवकाइ अप्रत्याशित रूपमा अन्त हुन जान्थ्यो। प्रिस्किल्ला र अक्विलाले पावललाई आत्मामा १ यूहन्ना ३:१६ अनुसार साँचो प्रेम प्रकट गरे। पावलले जे-जस्तो घटनालाई सङ्केत गरको भए तापनि, यो सम्भव छ कि रोमी १६:३ मा प्रिस्किल्लाको नाम पहिला उल्लेख गरिएको तथ्यलाई प्रकाशमा पार्दा उनकै बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको हुनुपर्छ। यसले हामीलाई अर्को बुँदातर्फ लैजान्छ।
९)	प्रिस्किल्ला अधीनतामा बस्ने पत्नी थिइन् तर दमन गरिएकी भने थिइनन्:
१०)	उनीहरू अन्तसम्मै विश्वासयोग्य र स्थिर थिए:
२ तिमोथी ४:१९ - यो पत्र पावलको अक्विला र प्रिस्का (प्रिस्किल्ला) सँग भएको पहिलो भेटको १४ बर्ष पछि लेखिएको अन्तिम पत्र थियो। तिनीहरू विश्वासयोग्य विश्वासीहरू थिए। यी दुई विश्वासीहरूको बारेमा पावल वा लूकाको कुनै पनि पत्रहरूमा नकारात्मक रूपमा भनिएको छैन। अभिलेखहरूले देखाए अनुसार, पावल र अक्विला/प्रिस्किल्लाबीच सधैं एक मन थियो। पावलले कहिले पनि तिनीहरूलाई डेमासलाई भन्नु परे झैं भन्नु परेन (२ तिमोथी ४:१०)। तपाईंको बारेमा नि? आजको १४ बर्ष पछि तपाईंको आत्मिक अवस्था कस्तो होला? हामीले हाम्रो पहिलो प्रेमलाई नत्यागौं र हामीले हाम्रो मुक्तिको आनन्दलाई कहिल्यै नगुमाऊँ।
« बाँसको कथा
प्रेमको साँचो उदाहरण »